Misy ifandraisany amin'ny finoana silamo | Apg29
Tamin'izany fomba izany no manamarina izany ny asa. Louisa sy Maren tsy manam-paharoa, vao haingana nahita ny fasana faobe amin'ny 34 hanapaka ny lohan'i Kristianina tany Libya.
Nahoana isika no mila mianatra bebe kokoa momba ny finoana silamo? Mahaliana dia kely fa ny antony maro mahatonga ny olona amin'ny ankapobeny mila hanatsara ny fahalalany.
Ny herintsaina habeny dia antony iray, ny finoana silamo dia tantara fivavahana faharoa lehibe indrindra aorian'ny Kristianisma. 1,6 lavitrisa eo ho eo ny olona, ​​nandritra ny ampahadimin'ny mponina eran-tany no Silamo, maro izay mbola mitombo, fa tsy noho ny tenany ny olona misafidy ny mino fa ny masoandro milentika isan-kariva ao amin'ny fotaka loharano (Coran 18:84), fa noho ny tsy fahalalana, ny loza mitatao ny fanamelohana ho faty ho an'ireo izay te-hiala, avo tahan'ny fahaterahana sy ny fifindra-monina.
Ny isan'ny silamo any Soeda sy ny firenena eoropeanina hafa no nipoaka tao anatin'ny taona vitsivitsy, ary maro amin'ny olona manodidina antsika mizara izany niaviany, dia zava-dehibe ny mahafantatra izay misolo tena.
Tsy mahalala ny zavatra ny CORAN sy ny hadita milaza lehibe na dia ao anatin'ny finoana silamo. Ny ankamaroan'ny Silamo mino fa ny finoana silamo ihany no azo lavina ny fahamarinan'ny, dia izao no efa nanambara izany rehetra ny androm-piainany. Mandritra izany fotoana izany, dia mianatra tsy mba nanontany ny loharanom-baovao silamo.
Ny silamo izay niova fo ny finoana silamo no nanao izany satria matetika no nanome miaraka amin'ny vaovao diso. Ny olona izay niova fo rehefa nianatra ny Soratra Masina no tena tsy fahita firy.
"Tsy mendrika ny tsy mahatoky lehilahy na vehivavy mahatoky, rehefa Allah sy ny Mpaminany hanapa-kevitra zavatra iray, mba hanana safidy malalaka ao amin'izany zavatra izany, ary izay tsy mino Allah sy ny Apôstôly, dia nampidirina am-ponja ao haseho heloka." (Coran 33 : 36)
"Ny Apôstôly 'Andriamanitra ankehitriny efa nahazo ohatra tsara dia tsara ho azy izay manantena any Allah sy ny andro farany, ary matetika ny fiantsoana an'Andriamanitra." (Coran 33:21)
Fa ny fahalalana kristianina no zava-dehibe indrindra, raha ny finoana silamo mamadika ny Baiboly anatiny. Rehefa mizara ny Filazantsara ho an'ny olom-pirenena mpiray silamo, tokony ho fantatsika ny fomba diso fandray ny mampita ny hafatra isika. Ny Kristianina milaza ohatra fa i Jesoa no ilay Zanak'Andriamanitra. Fa ny silamo, izany dia midika fa tsy maintsy ho nanana firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy, ary nanan-janakalahy, dia izany indrindra no mampianatra ny CORAN.
"Ahoana no azo antoka fa lanitra sy ny tany ny hanan-janaka, dia tsy mba manana vady?" (Quran 6: 101)
Toy izany koa ny amin'ny Andriamanitra telo izay iray. Tsy misy Kristianina mbola teo amin'ny tantara na nino, na nilaza fa Andriamanitra telo izay iray no ahitana, dia Jesosy sy Maria. Izany fotopampianarana dia diso ny CORAN izay mampianatra silamo fa izany no zavatra inoantsika.
"Na dia hoy Andriamanitra: Jesosy, zanak'i Maria, no lazao amin'ny vahoaka:" Ento ahy sy ny reniko toy ny andriamanitra, fa tsy Andriamanitra! (CORAN 5: 116) ""
Ny tena maha-kristianina ny finoana no nahafatesan'i Jesosy, sy ny maha-Andriamanitra ny fitsanganana amin'ny maty. Ny finoana silamo dia tsy mandà ihany izany rehetra izany, fa izany fotopampianarana izany, dia matetika tsy maintsy miaro ireo silamo rehefa hanafika ireo nampiofanina.
"Ary nanao hoe: Efa tokoa namono Kristy Jesosy, zanak'i Maria, ny irak'Andriamanitra, fa izy ireo tsy maty na voahombony tamin'ny hazo fijaliana Izy, fa toa azy ireo izany ihany, ary ireo izay milaza ny momba azy io, dia tena efa tsy azo antoka, satria tsy nanana tsy mba nahafantatra azy, afa-tsy tombantombana hanaraka; tsy nahafaty azy eo amin'ny fiainana tena izy, fa Andriamanitra efa nanangana azy, satria Andriamanitra no mahery sy hendry. (CORAN 4: 156) "
Aiza tsy fahalalana no lehibe indrindra
Any amin'ny firenena izay tsy fahalalana no lehibe indrindra, tsara indrindra izay mitombo tsara ny finoana silamo. Soeda dia ohatra tena tsara ny amin'izany. Ny mahatonga ny tsy fahalalana ankapobeny ny haino aman-jery, ny mpanao politika sy ny silamo afaka milaza na inona na inona mpitory sy ny olona mino azy.
Ohatra ny amin'izany ny fotoana tsy tambo isaina no andrenesantsika avy amin'ny olona samy hafa Imam mahafaty fanafihana mpampihorohoro amin'ny anaran'i Allah mba hanafika tsy misy ifandraisany amin'ny finoana silamo. Matetika isika no mandre izany, ohatra, Mohammed dia ny zon'ny vehivavy mpiady rehefa ao amin'ny Tandrefana amin'ny fanajana ny fahafahan'ny vehivavy. Ireo no lainga, fa ny olona mino azy io.
Tovolahy roa notapahin-doha
Afaka Louisa Vester Villager Jespersen sy Maren Ueland ohatra, ny vehivavy tanora roa ireo kerisetra notapahin-doha amin'ny fialan-tsasatra any Maraoka. Nisy olona amin'ny lanonana fahatsiarovana ny famonoana olona milaza fa tsy manana ifandraisany amin'ny finoana silamo sy ny fanjakana SVT no tselatra haingana latch hatrany. Izany dia manana ny zava-drehetra, ary ihany ifandraisany amin'ny finoana silamo.
Mariho fa ny mamono olona dia miara-miasa, izay nanao hoe: be dia be. Efa nilaza ny namako fa ho avy eo roa mpizaha tany, tamin-kabibiana Halal namono azy ireo, mitifitra ny zava-drehetra ary mamoaka amin'ny media sosialy fa efa nanao izay azo antoka ny mahazo ahy mihidy ny. Inona no manamarina ny mpamono olona antontan-taratasy? Satria ny CORAN sy ny hadita!
"Ny karama, izay miady an'Andriamanitra sy ny Apôstôly, ary instigate ratsy eto an-tany, ianao fotsiny fa hovonoina, na voahombo tamin'ny hazo fijaliana, na manana ny tanany sy ny tongony nanapaka crosswise, na dia ho voaroaka avy any amin'ny firenena. Izany ho ny fahafaham-baraka eto amin'ity fiainana ity sy any amin'ny fiainana ho avy miandry azy ireo ny sazy mahatsiravina. "(Quran 5:37)
Hivadika eto dia
Inona roa mpizaha tany mba hanao ny manjavozavo ho nenina amin'ny "miady an'Andriamanitra sy ny Apôstôly, ary instigate ratsy eto an-tany"? Louisa sy Marens namono efa nianiana hivadika io. Samy Norvezy sy Danemark dia ao anatin'ny fiaraha-mitantana ny eran-izay nandray anjara tamin'ny fomba maro samihafa hiadiana NO. Louisa sy Maren mamatsy ara-bola ny ady atao dia amin'ny alalan'ny fandoavan-ketra, ka meloka amin'ny heloka voalaza etsy ambony.
Araka ny Mohammed ny tenany dia toy izany izay mahazo fanohanana sy hampitaovana miaramila ny karama mitovy ho toy ny miaramila ny tenany. Izany no mahatonga ny Allah araka ny.
"Izay manampy ny mpiady mba hampitoerana ny Allah, dia hahazo valim-pitia tahaka ny, tsy misy fa detracts avy amin'ny mpiady ny valim-pitianareo any ny kely." (Ibn Sounane Majah 2758)
Fasana faobe amin'ny 34 nanapaka ny lohany Kristianina
Fantatsika fa ny finoana silamo dia ny devoly eo amin'ny fanapahan-doha Association an'ohatra. Jesosy no paroasy sy ny fiangonana dia ny vatana sy ny dia mazava fa i Satana te hanavaka azy ireo.
Amin'ny mialoha hiverenan'i Jesosy, Stefan Eliasson